Forensic Archives - Nova IT Group
Category Archive Forensic
Cyber Forensics – Part 1
Dec 19,2018 Leaveacomment By admin
What is Cyber Forensics ?
CERT ကနေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ …. Network or information System တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်နေရသူတစ်ယောက်ဟာForensics အခြေခံကို နားလည်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပိုမိုပြည်စုံအောင်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို အသုံးချပြီး အချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းသက်သေတွေကိုစုစည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေတွေကို စုစည်းခြင်း ဆိုတာကတော့ DNA fingerprint တို့ကို စစ်ဆေး စုစည်းခြင်းကဲ့သို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကတော့ data တွေကို စစ်ဆေးပြီး သက်သေ ခံရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Forensics မှာ အဓိက လုပ်ငန်းကတော့ ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေဖော် ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတာမှာ RECOVERY လုပ်ခြင်းအပိုင်းအပါအ၀င် နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်.။ ဥပမာ… ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ လက်ဗွေ… DNA ယူခြင်းဟာလည်း Forensics အပိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။ CyberForensicsမှာအဓိကအချက်၂ရှိပါတယ်။
ဖမ်းဆည်ရမဲ့သူဟာ…. ဖမ်းဆည်းနေချိန်မှာ Electronic Device ကိုအသုံးပြုနေပြီး ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေသလဲ ဥပမာ online လောင်းကစားလုပ်နေတာလား စသည်ဖြစ်ပေါ့ …. ပြီးရင် Website ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်နေတာလား Software ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ် ဆောင်နေတာ လားဆိုတာ ကြည့်ရပါမယ်။ Electronic Deviceဆိုသည်မှာ PC, Laptop, Tablet, mobile phone, GPS, CD, DVD, SD Card, USB, Router, Switch, Server, IoT device စသည်ဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်…. (ဘာလို့ Internet of things (IOT) ကို ထည့်ရသလဲဆိုရင် IoT device တွေပေါ်ကနေ crime ကျူးလွန်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ် …
အချို့သော နိုင်ငံတွေရဲ့ Cyber Law မှာ IOT Device အတွက်ပါ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာကို တွေကရှိရပါသည်။)
ပထမအချက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စစ်ဆေးပြီး တရားရုံးသို့ တင်နိုင်မဲ့ သက်သေခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်…အရေးကြီးတဲ့အချက် ၂ ချက်ကျန်ပါသေးတယ်။
စစ်ဆေးပြီး သက်သေခံရှာဖွေပြီး တာနဲ့မပီးသေးပါဘူး သက်သေခံ Device ကို မပျက်စီးအောင်သိမ်းဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်…စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလဲ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ မူရင်း Device ကိုမပျက်စီးစေပဲ ဘယ်လိုထိမ်းသိမ်းမှာလဲ ဘယ်လိုမှတ်သားထားမှာလဲ Case အလိုက်ရက်စွဲအလိုက်မှတ်သားထားမှာလား?
ဘယ်သူက ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးမှာလဲဆိုတာကိုလဲ …အသေးစိတ် မှတ်တမ်းထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(သိမ်းဆည်စဉ်မှာ အခြေအနေအရ စစ်ဆေးတာ သက်သေယူတာက
မပြီးသေးဘူးဆိုရင် … Device ကို Power ပိတ်ယူမှာလား …ဖွင့်ယူမှာလား ….ရှိပါသေးတယ် .. Computer Forensic အပိုင်းကျမှ အသေးစိတ်ဖြစ်အောင် ရေးသားပါမယ်)
ရရှိလာတဲ့သက်သေတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်အောင်ရေး မယ် … ပြီးရင် သက်သေခံ Device နဲ့တစ်ကွ တရားရုံကို တင်မယ် ..
နောက် post တွေမှာ Example ပုံစံတွေ …. အသေးစိတ်လိုက်နာရမဲ့အပိုင်းတွေ စစ်ဆေးရမဲ့နည်းလမ်းတွေ(အကျဉ်းချုပ်ပေါ့)ကိုရေးသားပေးပါမယ်..
Hypothesis လို့ခေါ်တဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက်အကြောင်းလာပါပြီ …..
Case တစ်ခုအတွက်ဖမ်းဆီးပြီး သက်သေခံ Device (Laptop ပဲဆိုကြပါစို့) ကိုသိမ်းထားလုိုက်ပြီး
ဥပမာ … ကလေးသူငယ်ပုံတွေကိုတင်ပြီး အွန်လိုင်းကနေ လိင်အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်တဲ့အမှုပေါ့ ….
လုပ်ဆောင်တဲ့သူကဒီလူပဲဆိုတာလဲသေချာသလောက်ရှိနေပြီး…. laptop ကိုအသုံးပြုပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့လဲယူဆတယ်….ခက်တာကသိမ်းဆည်းမိတဲ့LaptopကWindow ပြန်တင်ထားတာမကြာသေးဘူး ….. ….ကဲယူဆချက်တော့ရှိပြီးသက်သေခံအချက်အလက်ကမရသေးဘူး…ကဲ.. ဘာလုပ်မလဲ …. laptop အသုံးပြုထားတဲ့ Time … Window ပြန်တင်ထားတဲ့အချိန်ကို ကြည့်မယ် …. ပြီးရင် …. Storage Device ဖြစ်တဲ့ Hard Disk ဒါမှမဟုတ် SSD ပေါ့…. အဲဒါတွေရဲ့ Power On Time စစ်မယ် …
HD or SSD ၇ဲ့ Health ကိုစစ်မယ် …. စစ်ဆေးနေတုန်း… HD ကြွသွားရင် လုံးဝအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ….
အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ … မူရင်း HD or SSD ကနေ Clone ယူပြီး စစ်ဆေးတာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် …ဒါမှ သက်သေခံလဲ မပျက်စီးပဲ တရားရုံးမှာပြနိုင်မယ် ….
အခြေအနေအရ clone ပဲယူယူ .. မူရင်းကိုပဲစစ်စစ် …. Recovery တွေ Undelete နည်းလမ်းတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူး ….ကဲ … ဘာလုပ်မလဲ ထင်မြင်ယူဆတာနဲ့လွဲနေပြီး …. ဒါဆိုရင် ကိုယ်က ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးပြီးလဲ ….နောက်ထပ် သိပ္ပံနည်းကျ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို အသုံးချပြီး သက်သေခံရအောင်ယူမလဲ …. မိမိကျွမ်းကျင်မှု အလိုက်အသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ် …….
Author – Aung Zaw Myo
Tagscyber, forensic, knowledge, Nova, security, Tutorial
Linux Shell Scripting – Part 2
Linux Shell Scripting – Part 1
Bash course Cyber Security Forensic HowTo Latest News Linux Linux Server Miscellaneous Network Uncategorized Why
+959797794350
Copyright @ 2019 - Nova. Designed by Nova IT Group